Maxaa looga hadlay shirka golaha wadatashiga Qaranka? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxaa looga hadlay shirka golaha wadatashiga Qaranka?
Maxaa looga hadlay shirka golaha wadatashiga Qaranka?
Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-cadaala ayaa faahfaahin waxaa uu ka bixayay qodobada ay maanta shirka ugu doodeen madaxda Golaha Wadatashiga Qaran, kaasi uu shir guddoominayay R/wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in madaxdu ka arrinsanayaan qodobbada ajandaha shirka, islamarkaana waxaa uu tilmaamay in sii socon doona shirka inta la isla meel dhigayo dhammaan qodobbada muhiimka ah ee la xiriira doorashooyinka dalka.
Hadalka wasiir ku xigeenka ayaa imaanaya xili maanta in madaxda golaha wadatashiga Qaranka ay isku fahmi waayeen cidda looga dambeynayo masuuliyadda hoggaaminta amniga dalka.
Qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad gooleedyada ayaa R/Wasaaraha ku taageersan qorshahan, halka kuwa kalena ay ka biyo diideen.
Xogta ayaa sheegaya in habeen dambe ay isku soo laaban doonaan madaxda, islamarkaana halkaasi ka sii wadi doonaan dooda ku aadan arrimaha amniga, dardar gelinta doorashooyinka iyo jaangoyta waqtiga ay bilaabanaysa doorashada golaha Shacabka iyo xilliga ay dhammaanayso.
Waxaana markaasi kadib la filayaa in ay warmurtiyeed ay soo saaraan madaxda golaha wadatashiga Qaranka, balse lama oga natiijada ka soo bixi doonto shirka
Maxaa looga hadlay shirka golaha wadatashiga Qaranka? was last modified: January 7th, 2022 by Admin
Madaxweynaha Hirshabeelle oo Kulan la qaatay Danjiraha Norway ee Soomaaliya
Ra’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay Madaxda Jubbaland iyo Puntland (Sawiro)
Madaxweynaha Puntland oo Arrimaha doorashooyinka kala hadley Safiirada Qatar & Sweden
Ra’iisul Wasaare Rooble oo si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Dhuusamareeb